आइन्दा शिक्षकले राजनीति गरे जागिर चट हुने कानुन बनाउँदै सरकार
Posted on December 19, 2018 December 19, 2018 by Npnews
काठमाडौँ, ४ पुस । जुन पनि संस्था राजनितीबाट अछुतो छैन । विद्यालय जस्तो पवित्र ठाउमा पनि राजनिती हावी हुदै आइरहेको छ । तर अब भने सरकारले विद्यालयमा राजनीति गरे शिक्षकको जागिर चट हुने कानुनी व्यवस्था गर्न लागको छ ।
यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलको सिफारिसमा शिक्षामन्त्री बन्न पुगेका नेताले विद्यालयमा राजनीति गर्न नहुने बताउँदै आए पनि त्यो विषय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
सरकारले अब कानुन नै बनाएर विद्यालयमा दलगत राजनीति गर्न प्रतिवन्ध लगाउने तयारी गरेको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
भाषा परीक्षामार्फत नेपाली कामदारलाई जापान जाने बाटाे खुल्याे, अब दलालले ठग्न नपाउने
काठमाडौं । ४ पुस । बैदेशिक रोजगारीको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य मानिएको देश जापानले २०१९ को अप्रिलदेखि नेपाली कामदारलाई पनि लैजाने भएको छ ।
जापानमा कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक करिब २ लाख रुपैया पाउने छन । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।
जापान सरकारले रोजगारीका लागि श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशमा नेपाललाई सूचीकरण गरेको छ। जापान सरकारको महत्वाकांक्षी योजनाका रुपमा रहेको जापानी भाषा परिक्षामार्फत कामदार आपूर्ति गर्न यसअघि प्रस्तावित ७ देशमा नेपाललाई पनि थप गरिएको हो।
कम्वोडिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, इन्डोनेसिया, चीन, थाइल्यान्ड र म्यानमारलगायतका ७ देशको नाम गत हप्ता सार्वजनिक गरि बाँकी एक देशसँग छलफल भइरहेको बताइएपनि सोमबार ९ देशमा भिसा प्रकृयाका लागि जाँच लिने प्रस्ताव गरिएको हो। प्रस्तावित बाँकी राष्ट्रमा आठौं राष्ट्र मंगोलिया छ भने नवौं स्थानमा नेपाललाई राखिएको छ।
यस बारेमा जापानको न्याय मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै सरकारी समाचार संस्था एनएचकेले खबर सम्प्रेषण गरेको छ। यस नियम लागू भएसँगै नेपाली युवाका लागि जापान प्रमुख रोजगार गन्तव्य देशका रुपमा विकास हुने अनुमान गरिएको छ।
सोमबार जापानी न्याय मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ड्राफ्टमा २ देश थप गरिएको हो। एक हप्तापश्चात् मन्त्रालयले आवश्यक पक्रियामा छलफल गरी उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराइने बताइएको छ।
जापान सरकारले देशभर श्रमिक अभाव हुन नदिन बढी भन्दा बढी विदेशी कामदार लैजाने सम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त प्रस्ताव पारित हुनसके कामदार आपूर्ति गर्ने देशहरुसँग सम्झौता भई जापानमा काम गर्न जाने विदेशी कामदारका हकमा सहज हुने आँकलन गरिएको छ। नयाँ प्रक्रिया लागू भए जापान जाने कामदार ठगिने क्रमको पनि अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ।
जापानमा हाल रहेको प्राविधिक प्रशिक्षार्थी प्रणालीअन्तर्गत दलालहरुले विदेशी कामदारबाट ठूलो परिमाणमा रकम असुल्ने गरेको पाइएकाले पनि जापान सरकारले सम्झौता हुने दुई देशबीच सूचना आदनप्रदानलाई सहज बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ।
प्राविधिक तथा सिप परिक्षाको तयारी सुरु
जापानको न्याय मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुसहित जापानमा आउने विदेशी कामदारहरुलाई शान्त वातावरणमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि तयारी पनि गरिरहेको बताइएको छ। जापान सरकारले विभिन्न देशमा श्रम सहयोग केन्द्र खोल्ने तयारी समेत गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ।
जापानले भियतनाम, फिलिपिन्ससहित केही एसियाली देशमा प्राविधिक तथा सिप परिक्षा लिने आन्तरिक तयारी पनि थालिसकेको छ। आगामी अप्रिल महिनाबाट अर्धदक्ष र दक्ष कामदारको रुपमा दुई वटा भिषा प्रक्रियाबाट जापान आन चाहने विदेशी कामदारले अनिवार्य भाषा र सिप परीक्षा दिनुपर्ने छ।
विभिन्न सरकारी सेवा, स्वास्थ्य सेवा, विपदका बेला दिइने सूचना, मोबाइल सेवा, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका विदेशीहरुले प्रत्यक्ष सेवा लिन भाषागत समस्या भएका क्षेत्रहरुलाई समेत थप विस्तार र सुधार गरी विदेशी कामदारमैत्री बनाउने तयारी थालेको छ। प्रयोगकर्ताको सहज सेवाका लागि जापानी बाहेक अन्य भाषामा समेत यस्ता सेवा दिने तयारीमा जापान सरकार रहेको छ।
विद्यार्थीहरुका लागि काम गर्ने क्षेत्र फराकिलो हुने
जापान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारबाट रोजगारीका लागि वर्षेनी ठूलो संख्यामा विदेशी श्रमिक भित्र्याउने घोषणा गरिसकेको छ।
जापानले कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, कियरगिभर र सुरक्षा गार्डमा विदेशी कामदार लिने जनाएको छ। हाल अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी भिसामा जापान गइरहेका छन्। ५६ हजारभन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययनका लागि जापान पुगेका वैदेशिक रोजगार शैक्षिक परामर्श केन्द्रको तंथ्याकमा उल्लेख छ।
जापानमै अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुको हकमा जनवरीदेखि नै लागू हुनेगरी हाल बन्देज लगाइएका क्षेत्रहरुमा पनि रोजगारीका लागि अवसर प्रदान गरिने भएको छ। जसले स्कुलस्तरको अध्ययन सकेर पनि आफ्नै पढाइको क्षेत्रमा काम गर्न नपाउनेहरुका लागि पनि थप अवसर सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ। ***
संसारले थाहा नपाएको जापानका १० कुरा जुन सुने पछि तपाइपनि छक्क पर्नुहुन्छ !
एसीयाको आर्थिक महारथी जापान प्रविधीमा जति शसक्त छ त्यतिनै रोचक र रहस्यमयी पनि छ। धेरै नेपाली विद्यार्थी र कामदारको आकर्षणका रुपमा रहेको जापानका कयौं त्यस्ता पाटा पनि छन् जसलाई पत्याउन बाहिरी दुनियाँलाई गाह्रो पर्छ।
१०. घोडाको काच्चै मासु
हामीमध्ये धेरैले घोडाको काच्चै मासु खाने कुरा सोचेका समेत हुन्नौ तर जापानमा यो सामान्य हो। जापानमा बासासी भनिने घोडाको काच्चो मासु धेरै रेष्टुरेण्टमा सहजै पाइन्छ। जापानीहरुले वर्षौ देखि घोडाको काच्चो मासु खाँदै आइरहेका छन् ।
रोचक कुरा के छ भने बासासी गाइको मासु बीफ र पोर्क भन्दा पनि स्वस्थ मानिन्छ। यसमा धरै प्रोटिन हुन्छ तर कम क्यालोरी।
यसका साथै घोडाको मासुमा अन्य मासु भन्दा कम हानिकारक ब्याक्टेरिया हुन्छन्। घोडाको मासु खानले आयु लामो हुने समेत विश्वास गरिन्छ। टोकियोबाट पश्चिममा पर्ने नागानो शहरका बासिन्दाको आयु जापानमा सबै भन्दा बढि छ. सन २०१३ को तथ्याङक अनुसार त्यहाका पुरुषको औसत आयु ८०.८८ र महिलाको औसत आयु ८७.१८ छ। यसको कारण हो-त्यही घोडाको मासु।
९. भुकम्पै भुकम्प
जापान जति सु्न्दर छ त्यति नै धराप । यसको कारण हो दिनहुँ जस्तै आइरहने भुकम्पका झड्का। जापानमा प्रति वर्ष १५ सय भन्दा बढि भुकम्प जान्छन्।
स-सान देखी तगडा भुकम्पले जापानलाई सधै हल्लाउने गरेको छ। जापान संसारभरिमै धेरै भुकम्पको खतरा भएको ठाउँमा पर्छ। जापान ठुला चार टेक्टोनिक प्लेटमा पर्छ। जब ती प्लेट सर्छन, जापानमा भुकम्प जान्छ।
सन २०११ तीनै टेक्टोनिक प्लेटहरुमा ठुलो हलचल पैदा भयो र जापानको इतिहासकै ठुलो भुकम्प गयो। रेक्टर स्केलमा ९ मापन गरिएको तोहुको भुकम्पमा २९ हजारले ज्यान गुमाए।
तर भुकम्पका भएको मानविय क्षतिका हिसावले भने यो सबै भन्दा ठुलो थिएन। सन १९२३ मा जापानमा गएको भुकम्पमा १ लाख ४२ हजार मानिस मारिएका थिए। त्यतिखेरको भुकम्प रेक्टर स्केलका हिसावले ७.९ मात्र थियो।
८. अटोमेटिक बजार
जापानको भेण्डिङ मशिन भने अटोमेटिक बजारका लागि विश्वचर्चित छ। यहाँ ५० लाख भन्दा बढि भेण्डिङ मेशिन छन्। भेण्डिङ मेशिनमा पैसा तिरेर सामान किन्न सकिन्छ , यो स्वचालित पसल हो।
प्राय अन्य देशमा भेण्डिङ मशिनमा चिप्स, चकेलेट, पेय पदार्थ बेचिन्छ तर जापानका भेण्डिङ मेशिन यतिमा मात्रै सिमित छैनन्। यहाँ अण्डा, चामल देखि फुलसम्म बेचिन्छ।
यी भेण्डिङमा मेशिनमा ट्वाइलेट पेपर, कण्डम, छाता, देखि पर्न म्यागेजिन सम्म पनि पाइन्छ।
७. आवाज निकालेर खानु
प्राय देशमा आवाज निकालेर खानु राम्रो मानिन्न। पश्चिमी देशहरुमा त आवाज निकालेर खान खानु अशोभिय मानिन्छ। तर जापान भने ठीक उल्टो छ।
जापानमा सुरुप सुरुप आवाज निकालेर सुप वा नुडल्स खानु सामान्य मात्र होइन राम्रो मानिन्छ । आवाज निकालेर खाने कुरा खानुले जापानमा त्यसलाई मन पराएको र पकाएर खुवाउने पनि सम्मान गरेको अर्थ लाग्छ।
६. बेसबल लोकप्रिय
सुमो जापानको राष्ट्रिय खेल भए पनि सबै भन्दा लोकप्रिय र चर्चित खेल भने बेसबल हो। जापानमा याक्युको नामले चिनिने यो खेल एक अमेरिकनले सन १८७३ मा भित्र्याएका थिए। हाल जापानमा बेसबलका दुइ प्रोफेसनल लिग: पेसिफिक लिग र सेन्ट्रल लिग खेलिन्छन्। यसक अलावा प्रायजसो सबै विद्यालय र कलेजमा बेसबल खेलिन्छ। जापानका टेलिभिजनहरुले यो खेलमा निकै महत्वका साथ प्रसारण गर्दछन् ।
५. उच्च आत्महत्या दर
जापान निकै धनि देश हो, यसको रोचक इतिहास छ र लोभलाग्दो संस्कृति पनि छ। यही देशमा मेहनती, अनुशासित र सफल मानिसहरु छन्। तर पनि जापानको आत्महत्या दर निकै डरलाग्दो छ।
क वर्ष करिब ३० हजार जापानीले आत्महत्या गर्छन। प्रत्येक १ लाख मानिसमा २४.४ जानले आत्यहत्या गर्ने तथ्याङ्क छ। आत्महत्या जापानको एक प्रमुख मुद्दा बनिसकेको छ । जापानमा हुने गरेको आत्महत्याको एउटा प्रमुख कारण बेरोजगारीलाई मानिन्छ ।
यसरी आत्महत्या गर्ने युवामा धेरै जसो भर्खर पढाइ सकेका विद्यार्थी हुन्छन्।
यसै गरि डिप्रेसन र आर्थिक कठिनाइ पनि आत्महत्याका अन्य कारणमा पर्दछन्।
४. परिवारले नुहाउने पानी एउटै
जापानीका लागि नुहाउनु सरसफाई मात्र होइन् । नुहाउनु मानसिक र शारीरिक रुपमा आनन्दित हुनु पनि हो। यही कारणले धेरै जापानी साँझमा तातो पानीमा नुहाउँछन्। अचम्मको कुरा के छ भने पुरै परिवारले एउटै पानी प्रयोग गर्दछ। प्राय सबै जापानीको गरमा बाथटप हुन्छ। बाथटपको पानी पुरै परिवारले प्रयोग गर्दछ।
खासमा पहिले बाबु, आमा त त्यसपछि छोराछोरीले त्यही पानी प्रयोग गर्दछन्। वास्तवमा जापानीहरु बाथटपम बाहिरै साबुन लगाएर जीउ सफा गर्दछन् त्यसपछी बाथटबमा छिर्छन् र पालैपालो पुरै परिवार त्यही पानी प्रयोग गर्दछन्। जापानमा पाहुनालाई समेत तातोपानीबाट नुहाउन दिएर सम्मान गर्ने चलन छ। पाहुनालाई सबै भन्दा भन्दा पहिले बाथटबमा छिर्ने अवसर दिइन्छ।
३. सडकका नाम छैनन
जापानमा धेरै सडकका नाम राखिएका हुँदैनन्। नाम नभए कसरी चिन्ने त ?जापानमा अन्य भन्दा फरक एड्रेसिङ सिस्टम छ। नामका सट्टा सडकलाई ब्लक नम्बर दिइएको हुन्छ।
२.बयस्क धर्म सन्तान
अन्य देशमा साना उमेर शिशु वा बालबालिकलाई धर्म पुत्रका रुपमा भित्र्याउने चलन छ । तर जापानमा हुर्किइसकेका खासगरि पुरुषलाई समेत धर्म पुत्रका रुपमा अपनाउने चलन छ।
यसो गर्नुका दुई कारण छन्- एउटा परिवारको थर जोगाउन । अन्यत्र जस्तै जापानमा पनि पुरुषबाट मात्रै परिवारको नाम र थर कायम रहन्छ। दोस्रो कारण हो व्यवसाय जोगाउन। जापानका धनि परिवार जसले धेरै श्रीसम्पति र व्यवासय छ उनीहरुले व्यवसाय अघि बढाउन हुर्कि सकेको युवकलाई धर्म पुत्र बनाउने चलन छ।
यदि कुनै परिवारको छोरा व्वयसाय अघि बढाउन अयोग्य भएको खण्डमा समेत वयस्क पुरुषलाई पुत्रका रुपमा अपनाउने चलन छ।
१. सेक्समा कल्पनाशिलता
जब सेक्स विषय आउँछ, जापानीहरु खूला हृदयका मानिन्छन् ।अन्य देशमा प्रतिबन्धित मानिएका सेक्ससंग जोडिएका कुराहरु जापानमा स्विकार्य छन्। यसको उदाहरण ‘हेन्ताइ माङ्गा’ पनि हो। हेन्ताइ माङ्गा वास्तरमा चित्र कथा हो। जसमा मानिसलाई राक्षस देखि टेन्टाक्लससंग सेक्स गराइएको विषयलाई समावेश गरिएको हुन्छ। यी किताबहरु जापानी किताव पसल देखी अन्य स्टोरहरुमा सहजै पाइन्छ।
जापानमा अर्को चलन पनि छ, त्यो हो न्योताइमोरी। वास्तवमा नग्न महिला माथि सुसी राखेर खानुलाई न्योताइमारी भनिन्छ। यस्तै सुबासानपु, बुकाके र उनागी जस्ता सेक्स सस्कृति पनि जापानमा चल्तिमा छन्। सुबासानपुमामा धेरै महिलाहरुलाई आफ्नो अनुहारमा थुक्न लगाएर पुरुषहरुले आनन्द लिन्छन्। बुकाकेमा भने महिलाहरुले पुरुषहरुलाई आफ्नो अनुहारमा बीर्य झार्न लगाउँछन् । यसै गरि उनागीमा भने एक प्रकारको माछा महिलाको यौनीमा राखेर आनन्द लिइन्छ।
काठमाडौँ, ४ पुस । दुई सन्तानलाई राम्रोसँग पाल्न पैसा कमाउन कुवेत पुगेकी मनमाया (परिवर्तित नाम) फर्कदा पैसा होइन साथमा छोरा लिएर फर्कनुभयो ।
सानैमा बिहे गर्नुभएकी उहाँ श्रीमान्ले मदिरापान गरेर दुःख दिएपछि सन्तानको सुखी भविष्यका लागि कुवेत जानुभएको थियो । दलालले धेरै महिला कामदारलाई जस्तै घुमाउरो बाटो हुँदै उहाँलाई खाडी पु¥यायो । श्रीलङ्का हुँदै कतार पुग्नुभएकी उहाँ घरेलु श्रमिकका रुपमा दैनिक १९÷२० घण्टा काम गर्नुभयो । खटाइ धेरै भए पनि त्यसैका आधारमा उहाँको कमाइ राम्रो नै थियो । आराम गर्नका लागि कम समय भए पनि भने जति तलब पाउँदा उहाँ खुशी नै हुनुहुन्थ्यो । ३० जनाको परिवारका लागि खाना पकाउने, भाडा माझ्ने र कपडा धुनेलगायतका काममा लाग्नुभयो । काम गरेको घरको साहुनीको भाइले बलात्कार गरेपछि उहाँ गर्भवती बन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उसले अरुलाई भनिस् भने नेपाल जान पाउँदिनस् भनेकाले चुपचाप बसिरहेको थिएँ ।”
गर्भवती भएको थाहा पाएपछि साहुनीले अस्पतालमा लगेर शल्यक्रिया गराएको उहाँले बताउनुभयो । चार दिनसम्म अस्पतालमा हुँदा रेखदेख गर्ने कोही भएन । अस्पतालबाट उहाँलाई सिधै प्रहरीले जेल लगे । त्यहाँको जेलमा नै उहाँले साढे तीन महीना काट्नुभयो । रोएर कराएर मलाई नेपाल पठाउनु भन्दै अनुरोध गरेपछि उहाँ त्यहाँबाट छुट्नुभयो । विमानस्थलमा आइपुगे पनि उहाँसँग फर्कन पैसा थिएन । एकजना वृद्ध महिलासँग रोएपछि उनैले टिकट किन्न पैसा दिइन । अहिले नेपालमा आए पनि उहाँ घर र माइती कहीँ पनि जान सक्नुभएको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो बच्चा बोकेर घर र माइती दुवै फर्कन सकिरहेको छैन ।”
मनमाया उदाहरण मात्रै हो अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास दिवस मनाइरहँदा धेरै महिला कामदार न्यायको खोजीमा भौँतिररहेका छन् । कतिपय महिला बलात्कारपछि जन्मेका सन्तान लिएर फर्किएका छन् भने कतिपय दीर्घरोगका शिकार भएर फर्किएका छन् । खाडीमुलुकमा घरेलु श्रमिकका रुपमा जानेमध्ये कतिपय श्रीमान्लगायत परिवारका सदस्यबाट हिंसा भोगेकाले अन्तिम विकल्प वैदेशिक रोजगारी बनाएका थिए । उनीहरुमध्ये कतिपय महिला उता पुगेर थप पीडित बनेका छन् ।
मनिता (परिवर्तित नाम) चिनजानको महिलाका मार्फत कुवेत पुग्नुभएको थियो । उहाँको १४ वर्षमा बिहे भएको थियो । श्रीमान् कतार गएपछि छोरालाई पढाउने, बढाउने जिम्मेवारी उहाँ एक्लैको भयो । श्रीमान्ले विदेशबाट पैसा नपठाएपछि तीनै महिला (जसलाई उहाँ सानिमा भन्नुहुन्थ्यो) ले आर्थिकरुपमा सहयोग गर्न थालिन । पहिले नपढे पनि जापान पढाउँछु भनेकी ती महिलाले जापान जान धेरै पैसा लाग्ने भन्दै कुवेत पठाउने कुरा गरिन । पैसा कमाएर छोरा सजिलै पाल्न सक्छु भन्दै उहाँ राहदानी बनाउनेलगायतका तयारीमा जुट्नुभयो । यहाँबाट भारत जाँदा ती महिलाले “भारतमा दिदी भिनाजु छन् त्यही जान्छु” भनेर जाँच हुने ठाउँमा झुटो बोल्न सिकाइन । केही समय भारतमै एउटा परिवारका लागि काम गरेपछि मनिता त्यहाँबाट कुवेत पुग्नुभयो । उहाँ भन्नुभयो, “भनेकै ठाउँमा पुगेपछि के न होला भनेको उता पनि केही भएन ।”
मनिता कुवेत पुग्दा एउटा कोठामा बन्धक भएका सात जना महिला र एकजना पुरुष भेट्नुभयो । तीमध्ये एकजना गर्भवती महिलाले उहाँलाई आफूहरु सबै बेचिएर यहाँ आइपुगेको भन्नुभयो । मनिता त्यहाँबाट अनेक बहाना गरेर फुत्कनुभयो र भारत पुग्नुभयो । उहाँको खोजीमा भारत पुगेका माइतीसँगै नेपाल फर्किएर आउनुभयो । अहिले उहाँले दलाललाई पक्राउ गराउन सफल हुनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “विदेश गएर पनि केही कमाउन नसके पनि अब दलाल पक्राउ परेकाले उसलाई कारवाही भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।”
दलालले भनेजस्तै पैसा कमाएर भविष्य सपार्ने आशामा विदेश उडेका कामदार फर्किएर तीनै दलाल पक्राउ पर्ने आशा गर्छन् । विदेशमा दुःख पाएर फर्किएका महिला आफूलाई झुक्काएर पठाउने दलाल पक्राउ परेर कारवाही नहुँदा भने झनै दुःखी हुन्छ । कुवेतमा बेचिएकी सुनमाया (परिवर्तित नाम) अहिले दलाललाई कारवाही हुने आशामा काठमाडौँमा हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “अब यही केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।”
घरेलु श्रमिकका रुपमा खाडी पुग्दा दुईतीन घण्टा आराम गरेर २०÷२१ घण्टासम्म काम गर्दासमेत भने जति तलब नपाउने पीडा उनीहरुले भोगेका थिए । अधिकारका कुरा उठाएकै भरमा कारागारमा पर्ने नेपाली महिला धेरै छन् । कतिपय महिला कामदारले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य हिंसा भोगेर स्वदेश फर्किएका छन् । यहाँबाट एउटा देश भन्दै लगेर अर्काे देश पु¥याउने, भनेकोभन्दा बढी काम र कम तलब नहुँदा उनीहरु पीडित बनेका हुन् । रासस
एक वर्ष सम्म मोबाइल नचलाए कोकाकोला कम्पनीले दिने भयो एक करोड १४ लाख रुपैयाँ नगद पुरष्कार, यस्तो छ प्रक्रिया
अलौकिक माता सविता आचार्यको गम्भीर खुलासा : ‘निर्मलाको बलात्कार भएको हैन ३ जना महिला र २ जना पुरुषले हत्या गरेका हुन्’ (भिडियो हेर्नुस्)